Yaa ka cabsanaya Netflix? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » TECH & TELECOM Yaa ka cabsanaya Netflix?
Yaa ka cabsanaya Netflix?
TELES RELAY 19 February 2019
[RADIO] Yaa ka baqaya Netflix? [FULL]
Soo qaado MP3 -
Wuxuu ku dhashay 1997 sida shirkad yar kirada DVD by mail, Netflix ayaa noqday labaatan sano ka dib ciyaaryahan weyn ee qaybinta iyo wax soo saarka ee filimada iyo taxanaha online.
Shirkadda 2018, shirkaddu waxay maalgelisay in ka badan $ 8 bilyan oo wax soo saar . Tirada macaamiisheeda - 139 malaayiin adduunka ah waqtigan - waxay sii wadaan inay kor u kacaayaan. In France, Netflix guuleystay 1,5 million macaamiishu in muddo hal sano ah oo hadda ka badan 5 million, in ka badan Canal +, hoggaamiyaha taariikhiga ah ee TV-ga Times ee France .
Shirkada Maraykanka ee ku qoran si jiita dhagaystayaasha adduunka oo dhan ay dalab filimada iyo taxanaha ah ee sii kordheysa kala duwan, laakiin dhibto ee France qaybta aad u nidaamsan, taas oo ay si taxadar leh iska dhawraa. Haddii filimka Roma Mexico Alfonso Cuaron guuleystay Libaaxa Golden ee Festival Film Venice ah, ee movies Netflix ayaa weli laga mamnuucay ciidaha Faransiis, inta ay yihiin oo aan la saadaaliyey in tiyaatarada. Si kastaba ha noqotee, haddii Netflix uu ogolaado inuu filimka ku baahiyo tiyaatarka, waa in ay sugaan saddex sano si ay u siiyaan macaamiishooda sida ku cad "Taariikhda Warbaahinta" Faransiiska, oo loo maleynayo inay ilaaliso shineemooyinka iyo kala duwanaanshaha wax soo saarka. dhibaato An fakari karin for Netflix, kaas oo sidoo kale diiday in ay ka qayb qaataan maalgelinta ee shineemo Faransiis (sida ciyaartoyda oo dhan ee qaybta ee France), sida aysan u bixin canshuurta dakhliga ee France.
Gaaban, sida barnaamijyada kale sida Uber ama Airbnb, Netflix ayaa riixaya albaabka qaybta, iyada oo ay uga mahadcelinayso adeegyadeeda iyo in aysan xor ka aheyn xeerarka. Sidaa darteed Netflix waxay ku dili doontaa tiyaatarada filimka? Laakiin ma yihiin filim Netflix oo muujinaya runtii qiimo ku saabsan? Yaa ka cabsanaya Netflix?
Waraysiga Jonathan Duong la Thibault Hennetonsaxafiga, qoraaga maqaalkan "Nafaqada Netflix" in Le Monde diplomatique of February.
Theo Sarapo : Waxaan jeclahay inaan tago filimka
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/qui-a-peur-de-netflix
Kooxaha xallinta waxay na siiyeen khadadka Silverado HD muran
Saraakiishii hore ee sarsare ama hogaamiyayaal: sida Facebook iyo Google u shaqaaleysiiyaan joornaaliyaal sare
Jussie Smollett kiiskiisa ayaa shaaca ka qaaday garsoore - New York Times
iPhone XI | iPhone 11, laakiin aan lahayn kamarad weyn oo kamarad ah - VIDEO
Doorashadii madaxweynenimada ee Malawi: Peter Mutharika oo hogaaminayay natiijada qayb ahaan - JeuneAfrique.com
Cagahaagu waxay muujinayaan wax badan oo ku saabsan shakhsiyaadkaaga - SANTE PLUS MAG
PSG - PSG: Neymar iyo Mbappé way joogi doonaan, Tuchel ma damaanad qaadi doonto! - FOOT 01
DADKA & LIFESTYLE3,857
Daawooyinka dabiiciga ah59
DIB U EEGID26
DIB U EEGID AFRICAN PRESS88
Video dheeraad ah902